အမားသဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » အမားသဲ – KZ’s ထမင်းဆိုင်	24
Posted by ဇီဇီ on Jan 18, 2016 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 24 comments
ဒီ တစ်ရွာလုံး ကျောက်+နှင်း, တဂျီး နဲ့ မယ်ခွစ် ပဲ စားတဲ့ အသားး။
နှစ်ကူးမှာ တဂျီး အတွက် စပွိရှယ် စု ပေးတယ်လို့ မှတ်ပါ။
ဒီ တစ်ပတ် က စ တစ်လခွဲလောက် မဝင်နိုင်မှာမို့ ကြိုနှုတ်ဆက်ထားဒါ။
ဒီ အသားမစားသူများကတော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
မစားဖြစ်တာ ကြာရင်း မစားဖြစ်တာပါ (ဟယ် ရှင်းလပ်ထာ)
ကျောင်းသားရယ် ပဲ ရှောင်ပါတယ်။
သစ်သားဆိုရင်တောင် နု ရင်း ဝါးပါတယ်။
တစ်ယောက်ထဲစားမယ့် အမဲစတိတ်ပြုတ်.. (နှင်း)
ချွိုင်ဆန်း ၁စီး၊ဥနီ ၁တောင့် နဲ့ပြောင်းဖူး၁ဖူးတော့ ကုန်သွားပြီ..အမဲသားပြား ၃ပြားတော့မထိသေးဘူး..ညစာကို ဥနီတစ်တောင့်၊ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းထုပ်လေးတွေ ထပ်ထည့်စားမယ်လေ..ဆား၊ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူပဲ ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့soup base မပါ ရိုးရှင်းတဲ့ အသားနဲ့အရွက်အချိုရည် အရသာပါ
အမဲသား တောချက် (ကျောက်+နှင်း)
တောချက် ချက်ချင်ရင် ငရုတ်သီးအပုတောင့် ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးကြက်သွန်ဖြူနီစပါးလင်နဲ့ရော ထောင်းပြီးထည့်..စပါးလင်မရရင် ဂျင်းထည့် ဓားမ ထက်ထက်ကို စဉ့်တီတုံးပေါ်တင်လှန်အမဲသားကို လက်သန်းနှစ်ဆစ်လောက်လေးတွေ ဓားပေါ်ဆွဲဖြတ်..ဆီပါလေရုံနဲ့ ခုနထောင်းထားတာနဲ့ အမဲသား၊ ငန်ပြာရည်နဲ့ နယ်နှပ်ပြီး ၁နာရီလောက်နှပ်ထား….မြေအိုးလေးနဲ့ လုံးချက်ချက်..အရည်စပ်စပ်ရရင် ချ..မြေအိုးနံ့သင်းသင်း အတုံးသေးသေးလေးနဲ့ အရသာဝင်နေတဲ့ အမဲသားတောချက်ရရော..အမဲသား ၃၀ သားကို ငရုတ်ပု ၅ကျပ်သား သုံးပါသတဲ့..အုကျောက် ၅နှစ်၆နှစ်သားက သူ့ရဲ့အဒေါ် အမဲသား တောချက် ပါတဲ့..ရဲတွတ် စပ်နေတာပဲတဲ့ အရှည်တောင့်များ စပ်သုံးသလားတဲ့..မြေအိုးထဲက အမဲသားချက်အရသာတော့ စားချင်သား
အမဲသား အကျွပ်ကြော် (မယ်ခွစ်)
.ဂျင်းပြား..သွန်ဖြူထု..အရသာနနွင်း..သကြားနည်းနည်းနဲ့နယ်..ရေခမ်းပြုတ်..ပြီးတော့ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး တစ်တုံးစီ..၂တုံးစီအဆင်ပြေသလိုထု..ဆီထဲနည်းနည်းစီထည့်ကြော်..ကျွပ်ရင်ဆယ်..သများကတော့.. ၂ခါလောက်ကြော်ပြီးဆီသစ်လဲတယ်..ကြော်တဲ့ဆီနဲ့ပြန်စိမ်ထားတယ်.. ..
အမဲလုံး ဟင်းရည် (မွဘုတ်) အမဲသားဆ်ိုအကြောပါတတ်လို့ပါးပါးလှီးပြီးကြိတ်ရင် ကြိတ်တဲ့အချိန်ပြသနာနည်းစေပါတယ် ကြိတ်ရင်းနဲ့အပေါ်အောက်ဇွန်းနဲ့ ပြန်လှန်ပြီးမွှေရတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့‪#‎အရေးကြီးတာကမွှေတဲ့အချိန်စက်သေချာပိတ်ဖို့အထူးသတိပေးပါရစေ‬ချင်းရည်ကိုသီးသန့်အရင်စစ်ယူထားပါအသားကြိတ်စက်ထဲ အသား ငရုတ်ကောင်း ချင်းရည်ဆားနဲ့ သကြားအနည်းငယ် သကြားကတော့ မကြိုက် ရင်လည်းမထည့်ပါနဲ့ ရိုစ်မေရီလည်းအဆင်သင့်ရှိတာမို့ ရောထည့်ကြိတ်လိုက်ပါသေးတယ် မရှိလည်းဘှာမဖြစ်ပါဘူးတချို့ဆို အမဲသားရဲ့ပင်ကိုယ် အညှီနံကိုကြိုက်လို့Medium rare တောင်သေချာမှာစားကြသေးတာကိုညက်ညက်ကျေပြီးငါးဖယ်သားလိုလုံးသွားရင်ရေနွေးဆူဆူထဲ ဇွန်းနဲ့ခပ်ထည့်လိုက်တာပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဒီနည်းထဲမှာတော့ ပရိတ်သတ်တွေက အမြန်စားချင်နေကြလို့ကြိတ်ရင်လှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်ကြက်ဥ ထည့်ကြိတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အသားက ပွပြီးနူးညံနေပါတယ်ကြိတ်ဆွဲအရသာကြိုက်ရင်ကြက်ဥမထည်ပါနဲ့အရွက်ကြိုက်တတ်ရင်မုံညင်းခါးနဲ့ စားခါနီးခုခပ်ခုစားဆွေမျိုးမေ့သွားစေရမယ်အချဉ်အတွက် ငရုပ်စိမ်း ကိုညက်အောင်ကြိတ် ငါးငံပြာရည်ကို သံပုရာ ညှစ်တာပဲလိုက်ပါတယ်
အမဲသားအာလူး ဆီလည်ရေလည်ချက် (မွဘုတ်)
အမဲသားကို အရွယ်ညီအောင်တုံးပြီး ဆား ချင်းရည် ရှာလကာနဲ့နယ် တစ်နာရီကြာခန့်နှပ်ထားပါကြက်သွန်ဖြူနီချင်းကြိတ်ထားတာကိုဆီသတ်လို့နီလာရင် အသားထည့် ပြီး မီးအေးအေးနဲ့အဖုံး ဖုံးပြီးနှပ်ချက်ချက်ပါအသားကရေ မခမ်းမီ ကြိတ်ဆွဲလောက်အရောက်မှာ အရွယ်တော်တုံးထားတဲ့ အာလူးကိုရောပြီး အာလူးမြှုပ်ရုံရေထပ်ထည့့််ပြီးဆက်ချက်ပါအသားလည်းနူး အာလူးနူးတဲ့အနေမှာစိတ်ကြိုက်ဆီလည်ရေလည်အနေထားမှာရရင် မဆလာအနည်းငယ်ခပ်ပြီးအဖုံးအုပ်သူ့အငွေ့နဲ့သူ အနံ့ယူပါလေမဆလာ စောစောအုပ်ရင် အနံမကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်လို့နောက်ဆုံးမှထည့်စေချင်ပါတယ်
သများက.. လုံးချက်တာရယ်…အသားကောင်းတွေပြုတ်.. မွကြော်တာ..နည်းနည်းမကောင်းတာတွေသေးသေးတုံး..အရသာ..နနွင်းနယ်..ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်းတာနဲ့ရောနယ်ပြီး နူးအောင်လုံးချက်တာ..ကိုင်းသီး၁၀လုံးလောက်.ငြုပ်သီးအတောင့်၅၀လောက်လှီးဖြတ်ထားတယ်..အမဲသားနူးတော့ အဲ့ကောင်တွေထည့်ပြီး.. စိမ်းစားနပိ.. လက်သန်းဆစ်လောက်ထည့်မွေလုံး..အရသာပြင်.. ပင်စိမ်းအုပ်..ဆီက.. ကော်ဖီတဇွန်းလောက်ပဲထည့်တယ်..ဆီမပါဘူး.. စပ်ပြဲလန်.
သများက မဆလာမကြိုက်တော့ မဆလာထည့်ချက်လေ့မရှိဘဲ…ကယားတွေစားတဲ့ မက်ခါမှုန့်တို့ ကချင်တွေစားတဲ့ မက်ခရမ်မှုနိ့တို့ ထည့်ချက်တယ်..ဆီသတ်ရင်လည်း ညှော်လို့ လုံးချက်တယ်..အမဲသားကြိုက်တော့ အနံရှိတယ်မထင်ပေါင်…. သာမာန်ပဲဆေး.. ရေစစ်အရသာနနွင်းနံပြာရည်.. အမှုန့်တွေထည့်နယ်နှပ်ထားတယ်…နောက်တော့ သွန်ဖြူ..ဂျင်းထောင်း နှပ်ထားတဲ့အမဲသားထဲထည့်နယ်..ဆီနည်းနည်းထည့်… ရေခမ်းအောင်လုံးတယ်ချက်တယ်…ရေခမ်းဆီပြန်မှ… ရေနွေးထည့် မီးပြင်းပြင်းနဲ့ချက်တာပဲ..အနှစ်အတွက် ကြက်သွန်နီကို ဒီတိုင်းလှီးထည့်တယ်..တခါတလေကြက်သွန်နီကြော်ခြေထည့်တယ်..ကလီစာချက်ရင်တော့ ပထမနည်းအတိုင်းနယ်နှပ်..သွန်ဖြူဂျင်းနယ်နှပ်တဲ့အပြင်..ဖြူနီဂျင်းထောင်းနဲ့ဆီလည်းထပ်သတ်တယ်..ကလီစာထဲလည်း မိုးခိုသားထည့်ချက်တယ်..အသားပါမှ ပိုချိုတယ်ထင်လို့..ပုဆိုးကြမ်း..အထပ်တရာ.. ဖူးစောင်ချက်/ပြုတ်ရင်လည်း.. အသားထည့်ချက်တယ်..အသားက ပိုချိုတယ်ထင်လို့..
အမဲလျာကို.. အခွံကြမ်းတွေစင်သွားအောင်ရေနွေးထဲရှာလကာရည်ထည့်ပြုတ်..ဓားနဲ့ခြစ်ရုံပဲ.. သေချာခြစ်ထုတ်ဆေး…ပြီးရင် ဆား..သစ်ဂျပိုး..ကရဝေးရွက်နည်းနည်းထည့်ပြီးပြုတ်ပါ…အနည်းငယ်နူးလာရင်… ကြိုက်တဲ့ပုံစံတုံးပါ..သများကတော့ အားရပါးရစားချင်လို့..အကွင်းလိုက်လှီးတယ်..ခရမ်းချဉ်သီးပြုတ်.. ခွံခွာ.. ဇကာနဲ့တိုက်ထား..သွန်ဖြူနီဂျင်းဆီသတ်..ခရမ်းချဉ်သီးပါ ထည့်ပြီးဆီသတ်.. နာနာသတ်..ပြီးရင် တုံးထားတဲ့လျာထည့်…အိအောင်ဆက်ချက်..ပန်းငရုတ်ပွကြိက်ြသလိုလှီးဖြတ်.. အုပ်ပါ..တခါတလေ ချေချင်ရင်တော့.. မားသားချိုက်စ်နဲ့ ဖြူနီဂျင်းကိုဆီသတ်..စပါကတီဆော့ထည့်.. ဝိုင်တွေ.. ဝီတွေထည့်ချက်တယ်..
ဦးကြောင်ကြီး says: အမဲလျှာချက်တဲ့ မယ်ခွစ် ယဥယဥလေးနဲ့ သိပ်လှစိုဘဲ…
alinsett says: အမားသဲကို အနော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်ဂျ။
အနော် အကြိုက်ဆုံးအသားထဲမယ် အမားသဲက နံပါတ် ၂။
နံပါတ်၁ ကတော့ ဝါးသက်
အနော် အဲ့ အမားသဲ ကြိုက်တာကို အစ်မတော် ပြုံးတောင် သိနေပြီမို့ သူ့အိမ် လည်လည်သွားတိုင်း အဲ့အသား ချက်ကျွေးနေကျလိုကို. . . ဖြစ်လို့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အောင်ရဲလင်း နဲ့ နည်းနည်းတူသွားအောင် အသားမဲပေးဖို့လိုတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အသားမဲအောင် အမဲသားလေး ကျွေးတာပါ။
CharTooLan says: အမားသဲအရမ်းကြိုက်တယ် တောချက်လေးသရေကျထှာ :P
ကျော်တို့စီမယ် အမဲလျှာလိုချင်ရင်ဈေးထဲမှာ မနက်အစောတန်းစီရတယ်
ထမင်းကို ဟင်းအနှစ်တခုခုနဲ့ ငပိရည်ဖျော်နဲ့ သံပြာသီးညှစ်ပီး နယ်စားမယ်ဆိုရင်
အမဲသားအနှစ်က စားလို့အကောင်းဇုံး :D
ဦးကြောင်ကြီး says: မျောက်ဘီလူး သာကူးမ…
CharTooLan says: အိုညည်းရေ… အကောင်းဇုံးးးးအသားဟင်းတွေချပြဒေါ့မယ်စိုယင်
သက်သက်လွှတ် သမားများမဝင်ရလိုစ့် ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ဘာချင့် :P
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အမဲသားဟင်းတွေအားလုံးသွားရည်ကျစရာတွေချည်းပဲ
.တစ်ခုပဲ..သများကသွားကျဲ လို့လားမသိ..အမဲသားစားပြီးတိုင်းသွားကြားညပ်မှညပ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အပေါ်က ဟင်းတွေထဲ တစ်မယ်ပဲချက်တတ်တယ် ဇီရေ။ မိန်းမအပီသလွန်သွားလို့ပါ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟာလာ လုပ်ထားမှ စားဒယ်လို့
အမားသဲ တပြားဆွဲ ကလားပွဲ စကားဝဲ သများဘဲ လဂါးပဲ
Ma Ma says: အမားသဲ စားသူများအသင်း ၀င်ပါတယ်။
အိမ်မှာ ချက်လေ့ချက်ထမရှိ (မချက်တတ်တာလည်းပါ၏) လို့ ခရီးသွားရင် အပြင်မှာ စားဖြစ်ရင် အမားသဲရရင် အမားသဲပဲ စားတယ်။
Shwe Ei says: -သများက အသဲကြိုက်တာ
-ကြော်ပြီးရင် ဒီတိုင်းစားပစ်တာများတယ် :D
Wow says: ဗိုက်ဆာချိန်မှဖတ်မိတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: အမဲလုံးဆိုပြီး.. အဖြူလုံးဖြစ်နေသလားလို့…
စားတဲ့သူတွေများနေသဟ..။ သူတို့တွေစားနေတော့.. အမဲသားဈေးတက်တော့မှာပေါ့..။
မစားကြနဲ့.. အမဲသားဆိုတာ… နွားကလုပ်တာ..။ ထမင်းဆိုတာလဲ.. နွားကလုပ်တာ..။ blah blah..ါ်ုါ်
ဂျက်စပဲရိုး says: အမဲသား တောချက် ကို စားချင်လိုက်တာကွယ်…. ရှလွတ် ရှလွတ်း)
အောင် မိုးသူ says: အမဲသားတော့ ခုတလော ဓာတ်ကျနေတယ်
mgsai says: ချားချင်လိုက်တာ
အဲ့လိုပုံတွေပြတော့ တားက မော်နီတာကြီးကို လျှာနဲ့ ထလျက်ချင်လာပြီ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငင့်၊
အမဲသား စားသူ နည်းမယ်ထင်တာ။
Wow says: အမဲကလီဆာလဲစားကောင်းတယ် လှည်းတမ်းဈေးထဲကဆိုင်က အဆုတ်မယူပဲ အသဲ၊နှလုံး ၊ သရက်ရွက်တင်ယူလို့ရတယ်
kai says: မြန်မာတွေ(အများစု) အမဲသားစားကြတဲ့နေ့.. တိုင်းပြည်တိုးတက်နေ့အစပဲ…။
အိန္ဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုလောင်းရိပ်အောက်က.. လွတ်မြောက်ချိန်တန်ပြီ..။ ဆိုတော့…
နွားက.. နှာသီးဖျားကနေ.. အမြီးဖျားအမွှေးထိသုံးလို့ရတာမို့…. နွားမြီးကဗျာလေးနဲ့.. နုိ့တိုက်လိုက်ပါရစေ..။ “ဦးပုည၏ နွားတစ်ကောင်လုံး အသုံးချနည်း”
နို့မရ၍ သားက တစာစာ၊
kai says: ဒါကို ဒီလသုံးမယ်နော… ။ ပြည်ပြန်မွှေနေတဲ့.. ခြေရှည်ဇီမမသို့…။
ခင်ဇော် says: သုံးသုံးးး
ဆိုင်ညွှန်းတွေက နောက်တစ်ပတ်မှ တင်ပေးမယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဒီကလည်း နည်းနည်းယူသွားတီ :P
လုံမလေးမွန်မွန် says: သများ အမဲသား ပြန်စားပြီ . . လွိုင်ကော်မှာ အမဲလုံးမြင်တာ စိတ်ထိန်းမရလို့ ပြန်စားတာ ဟိ . . တောချက်လေး စားချင်လက်ထှာ